Raharaha Claudine”: tsy tokony higadra i Tsabo | NewsMada
Raharaha Claudine”: tsy tokony higadra i Tsabo
Fiaraha-miasa tanteraka no nataon’ny ben’ny Tanàna tamin’ny “Raharaha Ambohimahamasina”, tamin’ny fanadihadiana nataon’ny Inspection générale de l’Etat (IGE), fa tsy nisy nafeniny. Tsy nahita zavatra tsy ara-dalàna tamin’io ben’ny Tanàna io izahay mpisolovava azy.” hoy ny mpisolovava, ny Me isany Razafinjatovo Willy sy Andriambololona Jacques, teny Ankadifotsy, omaly, momba ny “Raharaha Ambohimahamasina” anagadrana ny Ben’ny Tanàna, Tsabo Pierre.
Tsy manaiky lembenana amin’ny zava-tsy mety ny minisitry ny Fitsarana. “Mino aho fa mety tsy fantany, angamba, izao zavatra izao. Maninona ny olona tsy manan-tsiny izay nanampy be dia be tamin’ny fanadihadiana indray no migadra?”, hoy ny Me Razafinjatovo Willy.
Mazava ny fehezan-dalàna famaizana milaza fa tsy azo sazina raha misy olona na firy na firy tafiditra amin’ny fikambanan-jiolahy na heloka iray, ka manao fitorohana ireo olona ireo, manamora ny asan’ny mpanao fanadihadiana.
Ao anatin’io ny raharaha Razaimamonjy Claudine
Ao anatin’ny raharaha Razaimamonjy Claudine, enjehina fa niray tsikombakomba tamin’ny fanodinkodinam-bolam-panjakana.”Tsy ekenay ny fanagadrana olona tsy manan-tsiny. Mangataka ny amoahana io olona io izahay mandra-pahatonga ny fotoam-pitsarana, satria tsy rariny izao. Ny tena nangalatra izany miriaria any?”, hoy ireo mpisolovava.
“Raha izao hatrany no atao, tsy misy fanjakana eto fa misy manampahefana manampatra fahefana. Heverina fa tsy ao anatin’ny ara-dalàna izany”, hoy ny Me Andriambololona Jean-Jacques. Nilaza io ben’ny Tanàna io fa baiko no azony tamin’ny minisitry ny Atitany, i Mahafaly Solonandrasana, tamin’izany.
Rehefa nandeha ny raharaha ny 8 aogositra 2016, tsy nisy sazy ho an’io ben’ny Tanàna io. Tsy nisy olona izay nanaraka ny raharaha nitsangana hoe diso izy, fa ny taona 2010 vao nogadraina. Ny dikany: natao anilihana ny fanodinkodinam-bolam-panjakana izy amin’izao? “Tsy mahazaka an’izany izahay”, hoy izy ireo.
Aiza ho aiza marina ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine”? Very anjavona ny mpiray tsikombakomba fa tsy hita ny tohiny sy farany, ary miriaria ny tena tompon-keloka.